प्रभु साहले राजीनामा दिनुको भित्री कथाः ओली–प्रचण्डको जवाफले निरास ! | Ratopati
प्रभु साहले राजीनामा दिनुको भित्री कथाः ओली–प्रचण्डको जवाफले निरास !
काठमाडौँ–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गरेको कार्य विभाजनप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै प्रभु साहले प्रदेश २ को अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । तर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले साहलाई राजीनामा फिर्ता लिन निर्देशन दिए ।
जनकपुरमा कार्यकर्ता भेटघाटको क्रममा प्रचण्डसँग साहले महेन्द्र पासवानलाई देखाउँदै भनेका थिए, ‘उहाँलाई म कसरी नेता स्वीकार गर्न सक्छु ? उहाँ म भन्दा धेरै जुनियर हुनुहुन्छ, राजनीतिमा उहाँ मेरो पछिपछि हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ ।’
#प्रचण्ड#प्रभु साह#केपी ओली#नेकपा